Aamir Khan iyo Ajay Devgn oo heshiis qarsoodi ah wada gaareen ka hor Diwali 2017 – Filimside.net
Aamir Khan iyo Ajay Devgn oo heshiis qarsoodi ah wada gaareen ka hor Diwali 2017
October 10, 2017 Zakarie Abdi
Waxaan wada ognahay filimada Golmaal Again iyo Secret Superstar tiyaatarada la isla saari doono feestada Diwali oo ku beegan 20-ka bishan October waana labo filim oo siweyn loo wada sugaayo.
Diwali waa xiliga ugu muhiimsan ee aflaanta Bollywood-ka ganacsi weyn sameeyaan madaama shacab weynaha Hindiya ee Hinduuga u badan feestadan sanadkii u kala harin xiliga ay kusoo aado waxayna socotaa maalmo kala duwan oo shaqooyinka laga nasanaayo.
Hadaba labada Super Star Ajay Devgn iyo Aamir Khan ayaa heshiis qarsoodi ah wada gaareen sidii isku dhaca labada filim Golmaal Again iyo Secret Superstar xal loogu heli lahaa sidoo kalena filim kasto tiyaataro ku filan loo saari lahaa si ganacsi ku filan u sameeyaan.
Aamir Khan filimkiisa Secret Superstar ee uu soo saare ka yahay door caawiye ahna ku leeyahay waxaa tiyaatarada la saari doonaa 19-ka bishan October waa maalin Khamiis ah oo ku aadan maalinta Hinduuga u dabaal gayaan feestada Lakshmi Puja.
Ajay Devgn filimkiisa Golmaal Again isagana waxaa tiyaatarada la saaraa 20-ka bishan October maalin Jimco ah oo ku aadan maalinta Hinduuga u dabaal dagayaan feestada Gujarati New Year.
Sidaa darteed Ajay iyo Aamir si qarsoodi ah waxay ku heshiiyeen in labadooda filim mid walbo maalin fasax ku filan helo si ganacsiyadooda aysan isku cunin ama daawadayaasha aysan ku dagaalamin.
Siyaasadan Aamir Khan filimkiisa Secret Superstar ayay dan ugu jirtaa madaama uu yahay film yar in kaligiis tiyaatarada maalinta kowaad la saaro sheekadiisa hadii ay wacnaato dad badan ayuu soo jiidan karaa maal maha xigana Golmaal Again oo filim weyn ah masraxa iyo ganacsiga wuu la qeebsan karaa.
Waxaa Aqrisay 1,469